Akunabo bonke abantwana abakwazi ukufunda amaqiniso okuphindaphinda usebenzisa i-memory memorization. Ngenhlanhla, kukho i-Magical Multiplication Magic Tricks ukufundisa abantwana ukuba baninzi kunye nemisebenzi efana neeMidlalo yeeMpeplication zokuncedisa.
Enyanisweni, uphando lubonise ukuba ukukhumbula ngekhanda akuncedi abantwana ukuba bafunde ukudibana phakathi kwamanani okanye baqonde imithetho yokuphindaphinda. Izibalo ezisekelwe ngokuzenzekelayo , okanye ukufumana iindlela zokunceda abantwana benze imisebenzi yamatriki ebomini bokwenene, kusebenza ngakumbi kunokuba bafundise iinyani.
1. Sebenzisa ukumela ukuphindaphinda.
Ukusebenzisa izinto ezinjengeebhloko kunye neemathoyizi ezincinci kunokunceda umntwana wakho abone ukuba ukuphindaphinda kuyindlela yokongeza elinye iqela leenombolo ezifanayo ngokuphindaphindiweyo. Ngokomzekelo, bhala ingxaki 6 x 3 kwisiqwenga samaphepha, uze ucele umntwana wakho ukuba enze amaqela athathu eebhloko ezintathu. Emva koko uza kubona ukuba yintoni ingxaki ebuzayo ukubeka ndawonye amaqela amathandathu.
2. Yenza izinto ezibini.
Iingcamango "zokuphinda kabini" ziphantse imilingo ngokwazo. Xa umntwana wakho eyazi izimpendulo kuye "ziphindwe kabini" ukudibanisa iinyaniso (ukongeza inamba kuye) uwazi kakuhle ngokuphindaphindiweyo iitheyibhile ezimbini. Mkhumbuze nje ukuba nayiphi na inani eliphindwe kabini lifana nokongeza loo nombolo kuye-ingxaki ibuza ukuba ingaba maqela amabini ale nombolo.
3. Qhagamshelana ukunqumla-ukubalwa kwamaqhinga amahlanu.
Umntwana wakho usenokuba wazi ukuba ubale kangakanani iifom. Into ayengaziyo kukuba ngokubala ezintlanu, ngokuqinisekileyo ufunda izihlandlo zeetafile.
Ukubonisa ukuba ukuba usebenzisa iminwe yakhe ukugcina ingqalelo kaninzi ukuba "ubaleke" ngeyintlanu, unokufumana impendulo kwiphina ingxaki ye-fives. Ngokomzekelo, ukuba uyabalwa ngamashumi amahlanu ukuya kwamashumi amabini, uya kuba neminwe emine ephethwe. Ngokwenene ufana no-5 x 4!
Kukho ezinye iindlela zokufumana iimpendulo ezingelula ukuba zibone.
Xa umntwana wakho ekwazi ukwenza amaqhinga, uya kukwazi ukumangalisa abahlobo bakhe nootitshala kunye netalente yokuphindaphinda.
4. I-Zero Appeal Magic
Ncedisa umntwana wakho abhale itafile ezili-10 aze abuze ukuba uyaphawula umzekelo. Oko akumele akwazi ukukubona kukuba xa kuthengiswa ngenani le-10, inombonakalo ibonakala ngathi i-zero ekupheleni. Mnike i-calculator ukuzama ukuyisebenzisa usebenzisa amaninzi amakhulu. Uya kubona ukuba rhoqo xa ephindaphinda ngo-10, loo zero "ngobugqi" ibonakala ekupheleni.
5. Ukupapashwa kweZero
Ukuphindaphinda nge-zero akubonakali konke okusemlenzeni. Kunzima ukuba abantwana baqonde ukuba kutheni xa ukwandisa inombolo nge-zero impendulo ayiyiyo, kungekhona inani oqale ngalo. Ncedisa umntwana wakho ukuba aqonde loo mbuzo "ngokwenani na amaqela ayenayo?" Kwaye uya kuqonda impendulo "Akukho nto." Uya kubona indlela enye inombolo inqabile ngayo.
6. Ukubona kabini
Umlingo wamaxesha angama-11 usebenza kuphela kunye nenombolo enye, kodwa kulungile. Bonisa umntanakho ukuba ukuphindaphindwa nge-11 kusoloko kukubona ubona kabini kwinani ayenayo. Ngokomzekelo, 11 x 8 = 88 no-11 x 6 = 66.
7. Ukuzongela phantsi
Xa umntwana wakho sele ekhohlise kwitafile zakhe zombini, uya kukwazi ukwenza umlingo ezine.
Mbonise indlela yokuphosa isiqwenga sephepha ngesiqingatha esilinganiselwe kwaye uvelise ukuba wenze iikholomu ezimbini. Mcele ukuba abhale iitafile zombini kwikholam enye kunye neetafile ezine kwikholam elandelayo. Umlingo oza kuwubona kukuba iimpendulo ziphindwe kabini. Oko kukuthi, ukuba 3 x 2 = 6 (ephindwe kabini), ngoko-3 x 4 = 12. Iphindwe kabili!
Eli qhinga lincinci, kodwa liphela kuphela kuba lisebenza kuphela ngamanani anqabileyo. Bhala phantsi iimbali zokuphindaphinda ezisebenzisa inani elingaqhelekanga kwaye ubukele njengoko umntwana wakho efumana ukungaqondakali kwemilingo. Unokubona ukuba xa ethatha omnye kumphandi, "uyayinqumla" kwisiqingatha kwaye ubeka ezintlanu emva kwayo, yile mpendulo kwinkinga.
A nga landeli? Khangela ngale ndlela: 5 x 7 = 35, eyona nto ingaphantsi kwe-1 (6), uthathe kwisiqingatha (3) nge-5 ekupheleni (35).
9. Nangona i- Magic Fives
Kukho enye indlela yokwenza amacwecwe amacwecwe avele ukuba awufuni ukusebenzisa ukubala kwe-skip-counting. Bhala phantsi zonke iinkcukacha ezibandakanya namanani, kwaye khangela umzekelo. Yintoni emele ibonakale phambi kwamehlo akho ukuba impendulo nganye isicatshulwa senani umntwana wakho wanda ngokuphindaphindiweyo ezintlanu, nge-zero ekupheleni. Ayikho ikholwa? Hlola le mizekelo: 5 x 4 = 20, kunye no-5 x 10 = 50.
10. iMagical Finger Math
Ekugqibeleni, ubuqhetseba obuninzi bomlingo wabo bonke - umntwana wakho wonke ufuna ukufunda amaxesha amathebula ezandleni zakhe. Mcele ukuba abeke izandla zakhe phambi kwakhe aze achaze ukuba iminwe ngakwesobunxele ibonisa amanani 1 ukuya ku-5. Iminwe esandleni sokunene ibonisa amanani 6 ukuya ku-10.
Kwaye, ngenxa yokukhohlisa kokuqala, mcele ukuba athabathe phantsi umnxeba wesandla sakhe sasekhohlo, okanye umnxeba inombolo 4.
Mkhumbuze ukuba i-9 x 4 = 36, uze ukhangele ezandleni zakhe. Ngasekhohlo kumunwe wakhe okhwebileyo kukho iminwe e-3. Kuya ngasekunene yiminwe yakhe e-6.
Umlingo kule nkohliso kukuba inani elinikezwa ngomnwe a lihla phantsi x 9 lilingana nenani leminwe ngakwesobunxele bomunwe ophethwe (kwiminyaka emashumi) kunye neminwe ngakwesokudla (kwindawo .)
Ukukhumbula iimpendulo kwiindinyaniso zokuphindaphinda kuyisakhono esibalulekileyo umntwana wakho kuya kufuneka ayenze ukuze aqhubele phambili kwiintlobo eziyinkimbinkimbi zemathematika. Yingakho izikolo zichithe ixesha elininzi zizama ukuqinisekisa ukuba abantwana banokukhupha iimpendulo ngokukhawuleza
Indlela yokufumana i-Tuner Shop ye-Mustang yakho
Kufuneka-Funda Amabhuku Ukuba Uthanda 'I-Catcher kwi-Rye'
Imali yegazi kwi-Islam
Isingeniso kwi-Sausage yaseJamani
38 Imiqondiso Engcwele yamaHindu